Slash dia klavier manana fahombiazana lehibe sy bot | Androidsis
Slash, klavie vaovao mampifandray ny fikarohana Google toa an'i Allo sy Gboard
Roa herinandro lasa izay dia fantatray fa namoaka ny Gboard ho an'ny iOS i Google, liana te hahafanta-javatra kitendry misy ny fikarohana mba tsy hilaozantsika akory ny fangatahana hizara izay zavatra tadiavintsika avy amin'ny fiononana avy amin'izany. Tamin'ny herinandro lasa Nitsambikina mialoha i Google hanolotra an'i Allo, ny fampiharana fandefasan-kafatra vaovao izay ankoatry ny fananana mpanampy virtoaly, dia manome safidy mitovy amin'ny fikarohana ihany koa ary manana ny zava-drehetra avy amin'ny fampiharana iray ihany.
Ny olana tokana ananantsika amin'izao dia ny tsy ahafahantsika miditra amin'ny GBoard, satria amin'ny iOS ihany no misy azy io, na amin'ny Allo, izay ho tonga amin'ity fahavaratra ity araka izay nambaran'ny Google avy amin'ny teny fototra nanolorana azy. Saingy toy ny mitranga matetika amin'ny tranga maro dia manana vondrom-piarahamonin'olon-kafa mpandrafitra antoko fahatelo izahay izay mandefa fampiharana izay misy ifandraisany betsaka amin'ilay fikarohana avy amin'ny fitendry. Slash Keyboard dia afaka mampiroborobo ny fahazotoan-komana kely hahafantatra izay azonao iainana rehefa nametraka an'i Allo tamin'ny findainao ianao.
1 Slash, kitendry maimaimpoana misy fampiasa manokana
2 Fampisehoana tena tsara
Slash, kitendry maimaimpoana misy fampiasa manokana
tavy tsy ho fitendry voalohany io izay manolotra fampiasa mitovy amin'ny Gboard na Allo, saingy azonao apetraka izao, raha haharesy lahatra anao fa afaka mikaroka sy mizara na inona na inona ianao, toy ny sary, toerana, mozika, GIF, sticker, emotikon sy maro hafa. Toy ny rindranasa fitendry hafa, ity iray ity dia mifamatotra amin'ireo tambajotra sosialy sy fampiharana fandefasan-kafatra, eny fa na dia ireo malaza indrindra toa ny WhatsApp, Twitter, Snapchat sy ny maro hafa aza.
Toy ny iray amin'ireo endri-javatra Telegram vaovao, Slash dia mampiasa bots hizara karazan-javatra rehetra. Fa afaka manamboatra ny "Slash" aza ianao hampiasa hitsin-dàlana amin'ny hafatra an-tsoratra. Izy io koa dia manana asa miafina telo: ny fifehezana kôrorô, ny soratra manokana ary ny fanontaniana sy valiny tsy ampoizina. Izy io koa dia ahitana fampiasa ho an'ny tambajotra sosialy Twitter amin'ny alàlan'ny fampiasana ny marika famantarana arahana ny solonanarana, hahazoana ireo famoahana avy amin'ny fitendry iray ihany.
Fampisehoana tena tsara
Ny maha-klavie vaovao anao ary miaraka amin'ity karazana asan-dahalo manokana ity dia mety hieritreritra ny olona iray any ho any fa mandringa izy, fa ny tena izy dia fahombiazana tsara azo. Eo an-tampon'ireo hitsin-dàlana rehetra ireo ho an'ny Foursquare, zarao ny toerana misy anao, mikaroha horonan-tsary ao amin'ny YouTube, makà sary, sarimiaina GIF ary sary famantarana miaraka amina teboka marindrano telo izay ahafahanao miditra amin'ny efijery ahafahanao manamboatra ny Slash araka izay itiavanao azy. .
Azonao atao midira amin'ny tsipika amin'ny alàlan'ny fanoratana ny baiko toy ny / pin, / emoji na / giphy. Ny maha samy hafa azy amin'ny Telegram dia tsy ampiasaina eto ny sonia amin'ny famantarana ary mankany amin'ny bara izahay. Slash dia manana baiko marobe izay tonga amin'ny alàlan'ny default toy ny soundcloud, vao haingana, mizara, google, twitter, nyt, amazon ary mozika ankoatry ny maro hafa.
Ary ankoatr'izay atao hoe fampiasa manokana ity, tahaka ny fampiharana mahomby tokoa hananana klavier azo vinavina izay manolo ny bara amin'ny hitsin-dàlana amin'ny fotoana hanoratanao. Manana lohahevitra dimy ianao hahafahanao mampanjifa ny endriny sy safidy mahaliana sasany ao amin'ny sehatr'asa ahafahana manampy valin'ny fikarohana ao amin'ny solaitrabe.
Kitendry mahafinaritra mahagaga noho ny isan'ny safidiny, ny fampidirana bots hanatanterahana karazana hetsika rehetra ao aminy ary misy maimaim-poana tanteraka avy amin'ny Google Play Store. Azo omena tsiny ny tsy fahaizany mampiasa fiteny roa miaraka, fa mandritra ny fotoana fohy dia toa tsara be ilay izy.
Alohan'ny handehananao dia ampahatsiahivo anao fa rehefa misafidy ny keyboard ianao amin'ny Safidy fidirana fiteny sy lahatsoratra dia ilay fampiharana tsy miseho amin'ny anarany manokana fa toy ny Android Keyboard (AOSP). Kitendry fitadiavana farafaharatsiny mba hahitana raha afaka mandresy lahatra anao isan'andro isan'andro izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Slash, klavie vaovao mampifandray ny fikarohana Google toa an'i Allo sy Gboard
Samsung Galaxy S7 Edge Fanamarihana tsy ara-drariny mamely ny tsena amin'ny volana Jona
Lalao video 5 lalao-3 ho an'ny mpankafy te hiala sasatra amin'ny Candy Crush Saga